« Ary ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny harena nafenina tany an-tsaha, izay hitan’olona, ka dia nafeniny ; ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra, dia nividy izany saha izany » Mat. 13 :44
Amin’izao androntsika izao ny fiangonana dia mionona kokoa amin’ny fahamarinana miseho ety ivelany amin’ny fanambarana, mazava sy mora azo izay heverin’ny maro fa manome izay rehetra ilaina, ary mionona amin’ny fanekena izany izy ireo. Fa ny Fanahy Masina izay miasa ao an-tsaina dia tsy mamela izany hitoetra ao amin’ny hakamoana. Mamoha ny faniriana madion’ny fahamarinana tsy voaloton’ny fahadisoana sy fampianaran-diso izany. Ny fahamarinan’ny lanitra dia manome valisoa ho an’izay mpandinika lalina. Tsy afaka ny hionona ao amin’ny hakamoana ny saina izay tena maniry ny hahafantatra ny fahamarinana.
Ampitahaina amin’ny harena afenina any an-tsaha ny fanjakan’Andriamanitra, “izay hitan’olona, ka dia nafeniny; ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra, dia nividy izany saha izany”. Novidiny izany mba hiasany, hangadiany sy hamadibadihany ny faritra rehetra amin’izany, ary hakany ny harena ao. Asan’ny Fanahy Masina ny mitarika izany fikarohana izany ary manome vokatra amin’izany. Rehefa mangady ilay saha ny mpikaroka dia mahita famantarana ny fisian’ny harena, izay tadiaviny hotombanana ny vidiny, ary aletiny lalindalina kokoa ny taho lava famantarana hahazoana harena sarobidy kokoa. Koa, baingan-tany feno harena maro no hita; Ny saham-bolamena ety an-tany dia tsy iangonan’ny takela-bato sy tany feno harena tahaka ny sahan’ny fanambarana misy harena izay mitarika hahita harena sarotra tadiavina avy amin’i Kristy.
Manana zanaka mpino manankarena amin’ny finoana Andriamanitra; vokatry ny asan’ny Fanahy Masina ao am-po izany. Avy ao am-po no isehoan’ny asan’ny Fanahy Masina ety ivelany, ka mampitombo ny toetra hankasitrahan’Andriamanitra. Saha midadasika feno haren’ny fahamarinana manao ahoana re no hanampian’i Kristy ny lafin’ny finoana mba horaisin’ny mpianany e! Mila finoana lehibe kokoa isika raha te hanana fahalalana tsara kokoa ny Tenin’Andriamanitra. Ny vato misakana lehibe indrindra amin’ny fandraisantsika ny tsilontsaina avy amin’Andriamanitra dia ny tsy fiankinantsika amin’ny fiasan’ny Fanahy Masina. EGWM,tt 1537,1538.